WAR CUSUB: Ciidamada Puntland guulo intee le’eg ka gaareen dagaaladii maanta ka dhacay Tukaraq & duleedka Gambara – Puntlandtimes
WAR CUSUB: Ciidamada Puntland guulo intee le’eg ka gaareen dagaaladii maanta ka dhacay Tukaraq & duleedka Gambara
GAROOWE(P-TIMES) – Ciidamada Difaaca ee dawladda Puntland ayaa guulo waa weyn ka gaaray Dagaalo culus oo ay maleeshiyaadka Somaliland subaxnimadii hore kusoo qaadeen deegaano kamid ah gobalka Sool ee Puntland.
Ciidamada ayaa horumar wanaagsan oo dhanka dagaalka ah ka gaaray jiidaha dagaalka, waxaana ciidamadu si toos ah dib uga qabsadeen maleeshiyaadka Somaliland deegaanka Tukaraq oo ay la wareegeen horaantii sannadkan.
Cutubyada sida gaarka u tababaran ee ciidamada Puntland ayaa guushan waxay ka gareen dhamaan aagagii dagaalka ee degmada Tukaraq iyo deegaanada ku dhaw dhaw.
Geesiyada Puntland waxay dharbaaxo kulul oo dagaal tuseen maleeshiyaadka Somaliland, waxayna ka qabsadeen gaadiidka dagaalka, qaar la gubay iyo Saraakiishii ugu sareysay oo lagu dilay dagaalkan.
Ujeedada duulaanka qar iska xoornimo ee ay soo qaadeen maleeshiyaadka Hargeysa ayaa ku qotoma Xaduud beenedkii Gumeystaha Ingiriiska, laakiin Guutooyin u carbisan dagaalka ayay la kulmeen, kuwaas oo waxba kama jiraan ka dhigay damaca foosha xun.
Dawladda Puntland warsaxaafadeed ay soo saartay waxay ku cadeysay in ay difaacayso dhulkeeda, isla markaasna aysan ogolaanin in Taako kamid ah dhulka Puntland ay ku jiraan maleeshiyaadka maamulka hargeysa, qorshuhuna yahay sidii 11 sanno ka dib Calanka Puntland & Kan Jamhuuriyada Soomaaliya looga taagi lahaa magaalada Laascaanood, iyadoo laga xoreynayo Cadowga Soomaali-diidka ah.
SI AAD U HESHO XOGTA U DAMBEYSAY RIIX HALKAAN